တောင်မျောက်ကလေး - ဝီကီပီးဒီးယား
(စပိန်: Monito del monte)
တောင်မျောက်ကလေး၏ အင်္ဂလိပ်အမည်ဖြစ်သော "မိုနီတို ဒယ်လ် မွန်တီ (Monito del Monte)" ဟူသော အမည်သည် စပိန်ဝေါဟာရဖြစ်ပြီး တောင်မျောက်ကလေးဟုပင် အဓိပ္ပာယ်ရလေသည်။ ၎င်းတို့သည် အလွန်သေးငယ်သော သားပိုက်အိတ်ပါ နို့တိုက်သတ္တဝါများဖြစ်ပြီး တောင်အမေရိကတိုက်အနောက်တောင်ပိုင်းဒေသဖြစ်သည့် ချီလီနှင့် အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံများတွင်သာ တွေ့ရ လေသည်။ ၎င်းတို့ကို ယနေ့ခေတ်သစ်တွင် ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမပြုသေးခင်ကမူ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၁သန်းခန့်ကတည်းက မျိုးပြုန်းတီးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီဟု ယူဆခဲ့ကြသည်။ တောင်မျောက်ကလေးသည် ညအချိန်တွင် သာ ကျက်စားပြီး သစ်ပင်ပေါ်တွင်သာ အဓိကနေသည်။ ၎င်းတို့သည် အင်န်ဒီးစ် တောင်တန်းများ၏တောင်ဘက်ခြမ်းရှိ ဗာလ်ဒီးလ်ဗီးယန်း သမပိုင်း မိုးသစ်တောများ ရှိ ချီလီဝါးတောများတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ၎င်းတို့တွင် တစိတ်တပိုင်း ဆုပ်ကိုင်၍ရသောအမြီး ရှိသည်။ တောင်မျောက်ကလေးများသည် အဓိက အားဖြင့် အင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့် အခြားသော သေးငယ်သည့် ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါလေးများကို စားပြီး ဖြည့်စွက်စာအဖြစ် သစ်သီးကို စားသည်။
လေ့လာချက်များအရ တောင်မျောက်ကလေးသည် တောင်အမေရိကတိုက်မှ အခြားသော သားပိုက်အိတ်ပါသော နို့တိုက် သတ္တဝါများထက်စာလျှင် ဩစတြေးလျတိုက်မှ သားပိုက်အိတ်ပါသောနို့တိုက် သတ္တဝါများနှင့် ပိုမို၍မျိုးနီးစပ်မှုရှိသည် ဟု ဆိုသည်။ သမိုင်းမတင်မီခေတ်မှ အလွန်သေးငယ်သောအရိုးများကို ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ကွင်းစလန်းပြည်နယ်မှ လယ်မြေတစ်ခုတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရာ ယင်းအရိုးများသည် တောင်မျောက်ကလေးနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေသည်ဟု သိရသည်။ ဩစတြေးလျတိုက်၏သိရသမျှတွင် အစောဆုံးဖြစ်သော သားပိုက်အိတ်ပါနို့တိုက်သတ္တဝါများအနက် တစ်မျိုးဖြစ်သော ဒီဂျာသီယာ သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၅၅သန်းခန့်က ရှင်သန်သွားသော သတ္တဝါတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ရှေးဦးကျ သောကြွက်နှင့်တူသည့်သတ္တဝါလည်း ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ သိပ္ပံပညာရှင်များက ဒီဂျာသီယာကို တောင် မျောက်ကလေး၏ ရှေးဦးကျသောဆွေမျိုးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြလေသည်။ ယင်းသုတေသနအရ တောင်မျောက်ကလေး သည် ပြန်လည်ခြေရာခံပါက ဒီဂျာသီယာအထိ ရောက်ရှိသွားမည့် မျိုးရိုးအဆက်အနွယ်မှ ဆင်းသက်လာသော နောက် ဆုံးမျိုးဆက် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ တောင်မျောက်ကလေးနှင့် ဩစတြေးလျတိုက်မှ သားပိုက်အိတ်ပါနို့တိုက် သတ္တဝများအကြားလမ်းကြောင်းလွဲသွားမှုသည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၄၆သန်းခန့်ကဟု ယူဆရသည်။
၂ ကျက်စားပုံ အလေ့အထ
တောင်မျောက်ကလေးသည် ပုံမှန်အားဖြင့် နွေဦးပေါက်ရာသီတွင် သားပေါက်တတ်ပြီး သားတစ်ကြိမ်ပေါက်လျှင် သား တစ်ကောင်မှ လေးကောင်အထိ ပေါက်တတ်သည်။ အမများတွင် သားမွေးများအနားသတ်ထားသည် သားပိုက်အိတ် အတွင်းတွင် နို့ကျိတ်လေးခု ပါရှိသည်။ ရင်သွေးများသည် အရွယ်ရောက်လာ သောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် သားပိုက်အိတ် အတွင်းမှ ထွက်ခွာကြလေသည်။ ၎င်းတို့ကို အသိုက်တွင်းတွင် ဆက်လက်ပြုစုလေသည်။ ထို့နောက်တွင်မူ မိခင်ဖြစ်သူ က သူ၏ကျောပေါ်တွင် တင်ဆောင်ကာ ခေါ်သွားလေသည်။ တောင်မျောက်ကလေးသားပေါက်များသည် မိခင်နို့ကိုသာ စို့ရသောအရွယ်လွန်သွားသော်လည်း မိခင်နှင့်အတူ ရှိနေသေးသည်။ အဖိုနှင့်အမများသည် အသက်နှစ်နှစ်လွန်သောအခါ တွင် မျိုးပွားနိုင်သောအရွယ်သို့ ရောက်လာကြသည်။
တောင်မျောက်ကလေးများသည် သစ်ပင်များပေါ်တွင်သာ အဓိက နေကြလေသည်။ ၎င်းတို့သည် ဘောလုံးကဲ့သို့ လုံးဝန်း သောပုံစံရှိသည့် အသိုက်များကို ရေစိုခံနိုင်ရည်ရှိသော ဝါးရွက်များဖြင့် ဆောက်လုပ်ကြသည်။ ယင်းဝါးရွက်များကို ရေညှိပင်များ၊ မြက်ပင်များဖြင့် အနားသတ်ထားကြပြီး သစ်ပင်၏ကောင်းစွာလုံခြုံသောနေရာများတွင် ထားရှိသည်။ အသိုက်သည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရောထွေးသွားစေရန်အတွက် ရံဖန်ရံခါ မီးခိုးရောင်ရေညှိပင်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားတတ် သည်။ ယင်းအသိုက်ကြောင့် တောင်မျောက်ကလေးကို နိုးကြားနေသည့်အချိန်တွင်ရော ၎င်းဆောင်းခိုနေသည့်အချိန်တွင် ပါ အအေးဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်လေသည်။ တောင်မျောက်ကလေးသည် ၎င်း၏အမြီးရင်းတွင် ဆောင်းခိုသည့်အချိန်အ တွက် အဆီများကို သိုလှောင်ထားလေသည်။ ၎င်းတို့သည် ချီလီနှင့် အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံများရှိ ကုန်းမြင့်ပိုင်းဒေသများရှိ သိပ်သည်းပြီး စိုစွတ်ထိုင်းမှိုင်းလျက်ရှိသော တောအုပ်များအတွင်းတွင် နေထိုင်ကျက်စားကြသည်။
အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ သမပိုင်းတောအုပ်များအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သော လေ့လာချက်တစ်ရပ်အရ ဆောင်းရာသီတွင် ကပ်စေးတတ်သော အဖြူရောင်ဘယ်ရီသီးများသီးတတ်သည့် ကပ်ပါးပင်တစ်မျိုးဖြစ်သော မစ်စ်တယ်လ်တိုးအပင် (Mistletoe) တစ်မျိုးနှင့် တောင်မျောက်ကလေးတို့အကြား အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း သိရသည်။ တောင်မျောက် ကလေးသည် ယင်းအပင်အတွက် တစ်ဦးတည်းသော သစ်စေ့မျိုးပြန့်ပွားစေသူ ဖြစ်လေသည်။ အကယ်၍သာ တောင် မျောက်ကလေးကြောင့် မျိုးပြန့်ပွားမှုမရှိပါလျှင် အဆိုပါအပင်သည် မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားမည်မှာ သေချာလေသည်။ တောင်မျောက်ကလေးသည် အဆိုပါအပင်၏အသီးများကိုစားခြင်းဖြင့် အစေ့များကို ပြန့်ပွားစေသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များက ဤမျိုးစိတ်နှစ်ခု၏ အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းပေါင်း၆၀မှ ၇၀ခန့်အတွင်းကတည်းက ဖြစ်မည် ဟု မှန်းဆခဲ့ကြသည်။
↑ Gardner 2005.
↑ Martin, Flores & Teta 2015.
↑ ၃.၀ ၃.၁ Thomas 1894.
↑ Gardner 2005, p. 21
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တောင်မျောက်ကလေး&oldid=715440" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။